QAYBTII 7AAD EE XARAFKA UGU HOREEYA MAGACAAGA AYAA SHEEGAYA DABEECADDAADA IYO QOFKA AAD TAHAY: - Haldoornews
QAYBTII 7AAD EE XARAFKA UGU HOREEYA MAGACAAGA AYAA SHEEGAYA DABEECADDAADA IYO QOFKA AAD TAHAY:
Waxaanu si taxane ah akhristayaasha ugu soo gudbina doona dabeecadaha ay khubarada cilmigu bulshadu sheegeen in lagu garan karo qof kasta iyada oo la eegayo xarafka koowaad ee uu magaciisu ka bilowdo. Haddaba anagoo tixgelinaya akhristayaal xiisaynaya inay ogaadan magacyadooda iyo waxay daaran yihiin, ayaanu si taxana idinku kaga soo gudbin doona shabagada Haldoor news.com waana Qaybtii 7aad
“Waxa aad tahay qof si fiican u garanaya waxa uu doonayo, laakiin waxa aan ka xumahay, in rumaynta iyo gaadhitaanka riyooyinkaagu ay waqti dheer kugu qaanayaan” Sidaa ayaa ay Niifiin Abu Shaallah ku tidhi qoraalkeeda aynu soo xiganaynay mar ay kula hadlaysay qofka magaciisu ku bilowdo xarafka R.
Xarafka R, waa xaraf awood badan.. waxa lagu yaqaannaa bani’aadamnimo aad u fara badan.. waxa uu leeyahay awoodo fara badan oo u suurtogelisa madax bannaani dhanka Adduunka ah (In uu xooggiisa kula soo baxo maalka), inta badanna waa lagu soo hirtaa. Waxaase laga yaabaa in aanay dadku ka dareemin hibadaas u gaarka ah. Waxa uu aad u jecel yahay caawinta dadka, waxaana dabeecad u ah go’aanka adag iyo dhiiri gelinta.
Khubarada cilminafsigu waxa ay aaminsan yihiin in magaca ku bilowda xarafka R, ay dadkiisu caan ku yihiin Edab iyo anshax wanaag, hab-dhaqan fiican iyo sharaf dhinaca akhlaaqda ah, in ay yihiin dad qunyar socod ah, oo arrimaha ku talax tag iyo gaabis midna aan ku gelin. Waa dad jecel in ruuxa ay la saaxibayaan uu noqdo mid ay garaad iyo garasho ahaan iskaga mid yihiin, taas oo ay ka door bidaan xitaa jacaylka, waayo waa dad aan aad u aaminsanaynba in awood jacayl iyo xiise labada qof si indho iyo dhego la’aan ah isugu soo jiidi karto. Waxa ay jecel yihiin in ay muujiyaan kartidooda iyo hibadooda, guulna ka gaadhaan hawlahooda, waxa ay caan ku yihiin maskax furnaan iyo aragtida ku liddiga ah oo ay aqbalaan ama dhegeysan karaan. Waa ruux saaxiibka daacad u ah oo weliba jecel in uu u muujiyo in uu saaxiibtinimadiisa u qalmo.
Xarafkani waxa uu noloshiisa ku dhamaystaa halgan u dhexeeya guul iyo guul darro, waxa noloshiisa ku jira caqabado fara badan.. waxa uu aad ugu baahdaa in la difaaco iyo in la taageero, waxaana u muhiim ah in la dhiiri geliyo si loo baro isku kalsoonaanta.
Waa xaraf himilooyin badan leh dadkana ku dhiiri geliya in ay himilooyin yeeshaan, laakiin marnaba ma xasilo oo ma dareemo qalbigiisu ammaan. Waa gooni socod, laakiin waxa uu leeyahay Ruux hogaamineed, waana qof wax hoggaamin kara, nasiib darrose ma jecla in uu hoggaamiye noqdo.
Qofka magaciisu xarafka S ka kaco waxaa lagu yaqaannaa in jacaylka ay qaddariyaan, waxa aanay mar kasta doonaan in saaxiibka, jacaylka, aabaha iyo hooyadu ay bu’ u noqdaan noloshooda oo dhan. Waa dad xasaasi ah oo erey kastaa u udhaawaci karo.
Sida ay xeeldheerihii reer Lubnaan ee cilmifalagga Niifiin Abu Shaallah oo aynu qoraalkan aad ugu soo xigannay sheegtay, ruuxa magaciisu uu ka kaco xarafka S, waa xasaasi, madow badani ku jiro oo aan hore loo fahmin, jecel in uu shucuurtiisa runta ah qariyo, dareenka jacayl ama nacayb ee uu qabana ku dadaala in aanu cid kale ka hor sheegin.
Dhamaan Bahda Haldoornews Waxay Hanbalyo U Dirayaan Meherka Xuseen Guuleed Jamac ( Afgaab ) iyo wariye : Nimco Omer Maxamed ( Samriye )
Xikmado Gaagaaban Oo Wax Badana Ka Badali Doona Naftaada